टुंगियो नेकपाको प्रवास कमिटी एकता, कसलाई कुन देश? - Everest Dainik - News from Nepal
टुंगियो नेकपाको प्रवास कमिटी एकता, कसलाई कुन देश?
काठमाडौं, चैत २० । पार्टी एकताका दस महिनापछि सत्तारुढ नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रवासमा बनाएका भ्रातृ सङ्गठनको एकताको प्रस्ताव तयार पारेको छ । सचिवालय वा स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेपछि एकता प्रक्रिया टुङ्गिनेछ ।
३६ देशमा रहेका प्रवासी सङ्गठनमध्ये ३४ देशमा नेतृत्वको भागबन्डासहित एकता प्रस्ताव तयार भएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले पूर्वी एसिया, युरोप, अमेरिका, खाडी राष्ट्र, अस्ट्रेलिया र भारतलगायतका ३६ देशमा प्रवासी सङ्गठन बनाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस महिलालाई अगाडि ल्याए मात्रै समतामूलक समाज निर्माण- प्रचण्ड
याे पनि पढ्नुस नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँड सुरु, केन्द्रीय सदस्यलाई यस्ता जिम्मेवारी
३२ देशको नेतृत्व टुङ्गिए पनि अझै २ देशको नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारे विवाद कायम छ । अस्ट्रेलिया र स्पेनका सङ्गठनको नेृत्वलाई दुवै पार्टीको दाबी कायम छ । जसले गर्दा यी दुई देशमा कसले नेतृत्व लिने भन्नेबारे सहमति हुन सकेको छैन । तर स्रोतका अनुसार अन्य ठूला देशमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व लिने यसअघि सहमति भइसकेका कारण अस्ट्रेलिया तत्कालीन माओवादीले पाउन सक्ने स्रोतले बतायो । त्यसो हुँदा स्पेन तत्कालीन एमालेको भागमा पर्ने देखिन्छ । मुख्य विवाद अस्टे«लियाको नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारेमा भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
नेकपाले पछिल्लो पटक पुस १३ गते स्थायी कमिटीबाट बनाइएको कार्यदलले पनि काम गर्न सकको थिएन । यहाँ पनि विवाद भएपछि मूल र असन्तुष्ट समूहले अलग अलग प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका थिए । राेताेपाटी अनलाइनबाट साभार